Alshabaab oo ku baaqay weeraro laga geysto dalalka Yurub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 21 January 2015
Mareeg.com: Al-Shabaab ayaa maanta oo Arbaco ah ugu baaqday taageerayaasheeda ku sugan Yurub inay geystaan weerarro la mid ah kuwii ay dhowaan caasimadda Paris ka geysteen dabley Islaamiyiin ah oo ka tirsanaa Alqaacidada Jazeeradda Carabta.
Al-Shabaab, oo ku tilmaamtay weerarkii lagu qaaday xarunta wargeyska Charlie Hebdo ‘howlgal geesinnimo leh’, ayaa digniin gaar ah u dirtay Faransiiska.
“Waxaan uga digaynaa France iyo kuwa la halmaala cadaawadda ay u hayaan islaamka iyo cawaaqibka ka dhalan kara dulmigooda ka dhan ah Muslimiinta,” ayay Al-Shabaab ku tiri war qoraal ah oo ay maanta soo saartay.
Alshabaab waxey weerarkii lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo ee Faransiiska ee ay ku dhinteen 17 qof ku tilmaamay iney u qalmaan kuwa lagu daydo.
“Waxaan uga faa’iideysaneynaa inaan u mahadcelinno walaalaheen, Al-Qaacidda ku sugan Gacanka Carabta, oo hormuud ah fulinta weerarrada dibadda ah ee lagu bar-tilmaameedsanayo xarumaha muihiimka ah ee cadowga,” qoraalka ayaa lagu yiri.
Al-Shabaab, oo wali maamusha dhul ballaaran oo miyiga Soomaaliya ah, ayaa la sheegaa inay xiriir dhow la leedahay dagaalyahannada Al-Qaacidda ee ku sugan dalka Yemen, halkaas oo mid ka mid ah labadii walaal ee geystay weerarka la rumeysan yahay inuu ku soo tababartay.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa Maxamed Geelle, nin Soomaali ah oo loo xukumay weerar faas loo adeegsaday oo sanadkii 2010 lala eegtay kaartuunistaha Denmark u dhashay ee lagu magacaabo Kurt Westergaard, kaas oo dhowr jeer oo hore wajahay hanjabaadyo dil tan iyo markii kaartuun uu ka sameeyay Nabi Muxammed (NNKA) uu ka soo muuqday joornaal ka soo baxa Denmark sanadkii 2005.
Meelo ka mid ah dunida Islaamka oo Soomaaliya ku jirto ayaa si weyn looga soo horjeestay wargeyska Faransiiska ee Charlie Hebdo iyo dadka ku dhiirigeliyey iney ku xadgubaan Islaamka.
Daawo sawirrada masjidka Isbaheysiga Islaamka oo si weyn loo qurxiyey